Shandisa zvipfuyo zvezvipfuyo kuburitsa manyowa ehupenyu
Kurapa zvine musoro uye kushandiswa kwakanaka kwemanyowa ezvipfuyo kunogona kuunza mari zhinji kune vazhinji varimi, asiwo kusimudzira kusimudzira kwemaindasitiri avo.
Biological organic fetiraiza rudzi rwe fetiraiza ine mashandiro e microbial fetiraiza uye organic fetiraiza, iyo inonyanya kutorwa kubva kune zvisaririra zvemhuka nezvirimwa (senge mupfudze wezvipfuyo, mashanga ezvirimwa, nezvimwewo) uye inoumbwa nekurapa kusingakuvadzi.
Izvi zvinoona kuti fetiraiza yemanyowa ine zvikamu zviviri: (1) rakanangana nebasa rezvipuka. (2) yakarapwa marara ehupenyu.
(1) Yakananga inoshanda microorganism
Iwo akasarudzika anoshanda ma microorganisms mune ehupenyu manyowa manyowa anowanzoreva kune zvidiki, zvinosanganisira mhando dzakasiyana dzehutachiona, fungi uye actinomycetes, izvo zvinogona kukurudzira shanduko yevhu ivhu uye kukura kwezvirimwa mushure mekushandisa kune ivhu. Mamwe mabasa anogona kuverengerwa seinotevera:
1.Nitrogen-inogadzirisa mabhakitiriya: (1) symbiotic nitrogen-inogadzirisa mabhakitiriya: anonyanya kureva leguminous chirimwa rhizobia senge: rhizobia, nitrogen-inogadzirisa rhizobia, isingagumi ammonia-inogadzirisa rhizobia mbesa, nezvimwe; Asina leguminous chirimwa symbiotic nitrogen-inogadzirisa mabhakitiriya akadai saFranklinella, Cyanobacteria, yavo nitrogen yekugadzirisa kushanda yakakwira. ② Autogenous nitrogen-inogadzirisa mabhakitiriya: senge akakomberedza brown nitrogen-inogadzirisa mabhakitiriya, photosynthetic bacteria, nezvimwewo (3) Joint nitrogen-fixing bacteria: zvinoreva ma microorganisms anogona kungosurukirwa kana uchigara mumidzi nemashizha nzvimbo yemuti rhizosphere , senge Pseudomonas genus, lipogenic nitrogen-inogadzirisa helicobacteria, nezvimwe.
2) Phosphorus kuputsa (kupera) fungi: Bacillus (senge Bacillus megacephalus, Bacillus cereus, Bacillus humilus, nezvimwewo), Pseudomonas (sePseudomonas fluorescens), Nitrogen-yakatemwa mabhakitiriya, Rhizobium, Thiobacillus thiooxidans, Penicilliumger, Aspergillus , Streptomyces, nezvimwe.
3.Dissolve (dissolve) potassium bacteria: silicate bacteria (yakadai secolloid Bacillus, colloid Bacillus, cyclosporillus), isiri-silicate potassium bacteria.
4.Mishonga inorwisa mabhakitiriya: Trichoderma (yakadai seTrichoderma harzianum), actinomycetes (seStreptomyces flatus, Streptomyces sp. Sp.), Pseudomonas fluorescens, Bacillus polymyxa, Bacillus subtilis marudzi, nezvimwe.
5.Rhizosphere kukura-kukurudzira mabhakitiriya uye kukura kwezvirimwa-kukurudzira fungi.
6.Light chikuva mabhakitiriya: akati wandei marudzi e genus Pseudomonas gracilis uye akati wandei marudzi eiyo genus Pseudomonas gracilis. Izvi zvipuka zvine hunyanzvi hwekubika mabhakitiriya anogona kukura pamberi pehydrogen uye akakodzera kugadzirwa kwehupenyu hwehupenyu fetiraiza.
7. Insect-resistant uye yakawedzera yekugadzira mabhakitiriya: Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, Phylloidase, Cordyceps uye Bacillus.
8. Cellulose kuora mabhakitiriya: thermophilic lateral spora, Trichoderma, Mucor, nezvimwe.
9.Zvimwe zvinoshanda zvidukuduku: mushure mekupinda muivhu, vanogona kuchengetedza zvinhu zvemuviri zvinoshanda uye kusimudzira kukura kwezvirimwa. Mamwe acho ane kunatswa uye kuora kunokanganisa ivhu chepfu, senge mbiriso uye lactic acid mabhakitiriya.
2) Organic zvinhu zvinotorwa kubva kumhuka zvisaririra zvakaora. Organic zvinhu zvisina kuvirisa, hazvigone kushandiswa zvakananga kugadzira fetiraiza, zvakare haigone kuuya mumusika.
Kugadzirira kuti mabhakitiriya anyatsobatana nezvinhu zvakasvibirira uye nekuwana kunyatso kuvirisa, inogona kumutswa zvakaenzana kuburikidza ne compOst Turner muchina sezviri pazasi:
Inowanzo shandiswa organic zvigadzirwa
(1) Tsvina: huku, nguruve, mhou, hwai, bhiza uye umwe mupfudze wemhuka.
(2) Hushanga: mashanga echibage, mashanga, mashanga egorosi, mashanga e soya uye mamwe madzinde ezvirimwa.
(3) husk uye bran. Rice husk powder, nzungu husk powder, nzungu michero yeupfu, mupunga bran, fungus bran, nezvimwe.
(4) madhiri: distiller's madhiri, soy muto madhiri, vhiniga madhiri, furfural madhiri, xylose madhiri, enzyme madhiri, garlic madhiri, shuga madhiri, nezvimwe.
(5) chikafu chekeke. Soybean keke, soya kudya, mafuta, rapeseed keke, nezvimwe.
(6) Mamwe matope epamba, firita madhaka eshuga yekuchenesa, shuga matope, bagasse, nezvimwe.
Izvi mbishi zvigadzirwa zvinogona kushandiswa semubatsiri wekuvaka chikafu mbishi zvigadzirwa zve kugadzirwa kwehutachiona hwemanyowa mushure mekuvira.
Iine chaiwo majekiseni uye akaora manyowa zvigadzirwa aya maviri mamiriro anogona kugadzirwa ehupenyu organic fetiraiza.
1) Direct yekuwedzera nzira
1, sarudza yakatarwa microbial mabhakitiriya: inogona kushandiswa seimwe kana maviri marudzi, zvakanyanya kwete anopfuura matatu marudzi, nekuti iyo yakawanda sarudzo yebhakitiriya, inokwikwidza michero pakati peumwe neumwe, inonanga zvakananga kune kuwirirane basa reiyo offset.
2. Kukarukuretwa kweuwandu hwekuwedzera: zvinoenderana neyakajairwa NY884-2012 yeiyo bio-organic fetiraiza muChina, huwandu hunoshanda hwehutachiona hwehupenyu hwebio-organic fetiraiza hunofanira kusvika pa0.2 miriyoni / g. Mune imwe tani yezvinhu zvakasikwa, anopfuura maviri makirogiramu ehumwe hunhu hunoshanda neiyo inoshanda huwandu hwehutachiona hwehupenyu ≥10 bhiriyoni / g inofanirwa kuwedzerwa. Kana huwandu hwehutachiona huripo huri 1 bhiriyoni / g, anopfuura makumi maviri kg anofanirwa kuwedzerwa, zvichingodaro. Nyika dzakasiyana dzinofanira kuwedzera zvine mutsindo nenzira dzakasiyana.
3. Kuwedzera nzira: Wedzera anoshanda mabhakitiriya (hupfu) kune yakaviriswa organic zvinhu zvinoenderana nenzira yakataurwa mubhuku rekushandisa, fambisa zvakaenzana uye kurongedza.
4. Zvidziviriro: (1) Usaomeswe patembiricha yakakwira pamusoro pe100 ℃, zvikasadaro inouraya hutachiona hunoshanda. Kana zvichidikanwa kuti zviome, zvinofanirwa kuwedzerwa mushure mekuoma. (2) Nekuda kwezvikonzero zvakasiyana, zvirimo zvehutachiona muhutachiona hwemanyowa hwakagadzirwa neyakajairwa nzira yekuverenga kazhinji haisvike kune akakodzera data, saka mukugadzirira maitiro, anoshanda ma microorganisms anowanzo kuwedzerwa kupfuura gumi% kukwirisa kupfuura akakodzera data .
2) yechipiri kukwegura uye kuwedzera tsika nzira
Inofananidzwa nenzira yekuwedzera yekuwedzera, iyi nzira ine mukana wekuchengetedza mutengo webhakitiriya. Chinokanganisa ndechekuti kuyedza kunodiwa kuti uone huwandu hwehutachiona chaihwo hwekuwedzera, uku uchiwedzera imwe nzira. Izvo zvinowanzo kurudzirwa kuti iyo yekuwedzera huwandu ive makumi maviri muzana kana yakakwira yenzira yekuwedzera yekuwedzera uye isvike iyo yenyika yehupenyu organic fetiraiza mwero kuburikidza neyechipiri kukwegura nzira. Matanho ekushanda ndeaya anotevera:
1. Sarudza yakatarwa microbial mabhakitiriya (upfu): inogona kuve imwe kana maviri marudzi, kunyanya asiri anopfuura matatu marudzi, nekuti mabhakitiriya mazhinji anosarudza, kukwikwidza michero pakati peumwe neumwe, zvinonanga zvakananga kune zvakakonzerwa nemabhakitiriya akasiyana.
2. Kukarukuretwa kweuwandu hwekuwedzera: zvinoenderana neyakajairwa bio-organic fetiraiza muChina, huwandu hunobudirira hwehutachiona hwehupenyu hwebio-organic fetiraiza hunofanira kusvika 0,2 miriyoni / g. Mune imwe tani yezvinhu zvakasikwa, huwandu hunoshanda hwehutachiona hunorarama ≥10 bhiriyoni / g yeiyo chaiyo inoshanda microbial (poda) inofanirwa kuwedzerwa inokwana 0.4 kg. Kana huwandu hwehutachiona huripo huri 1 bhiriyoni / g, inopfuura 4 kg inoda kuwedzerwa, zvichingodaro. Nyika dzakasiyana dzinofanirwa kutevedzera zviyero zvakasiyana zvekuwedzera zvine mutsigo.
3.Kuwedzera nzira: inoshanda yebhakitiriya (hupfu) uye gorosi bran, mupunga husk hupfu, bran kana imwe yeiyo yekusanganisa, inowedzera zvakananga kune yakaviriswa zvinhu zve organic, kusanganisa zvakaenzana, zvakamisikidzwa kwemazuva 3-5 kuti aite iwo chaiwo anoshanda mabhakitiriya kuzviparadzira.
4. Hunyoro uye tembiricha kudzora: panguva yekudyara, iyo hunyoro uye tembiricha inofanirwa kudzorwa zvinoenderana nehunhu hwehutachiona hunoshanda. Kana iyo tembiricha yakanyanya kukwirira, iyo stacking kukwirira inofanira kuderedzwa.
5. Chaicho chinoshanda mabhakitiriya kuona zvemukati: mushure mekupera kwekuisira, sampling uye tumira kune iyo institution ine microbial yekuona kugona kwekutanga bvunzo kana izvo zvemukati chaiwo majekiseni anogona kusangana neyakajairwa, kana zvichikwanisika, unogona kugadzira zvipenyu organic fetiraiza. nenzira iyi. Kana izvi zvikasakwanisika, wedzera iyo yekuwedzera huwandu hweanoshanda mabhakitiriya kusvika ku40% yenzira yekuwedzera yekuwedzera uye dzokorora kuyedza kusvika kubudirira.
6. Zvidziviriro: Usaomeswe patembiricha yakakwira pamusoro pe100 ℃, zvikasadaro inouraya hutachiona hunoshanda. Kana zvichidikanwa kuti zviome, zvinofanirwa kuwedzerwa mushure mekuoma.
Mu kugadzirwa kwe bio-organic fetiraiza mushure mekuvira, inowanzova hupfu zvinhu, izvo zvinowanzo bhururuka nemhepo munguva yakaoma, zvichikonzera kurasikirwa kwezvinhu zvakasvibirira uye kusvibiswa kweguruva. Naizvozvo, kuitira kudzikisa guruva uye kudzivirira kutora,granulation maitiro inowanzoshandiswa. Unogona kushandisa inokanganisa zino granulator mumufananidzo uri pamusoro wegranulation, inogona kuiswa kune humic acid, kabhoni nhema, kaolin uye zvimwe zvinonetsa kugadzira zvinhu zvakagadzirwa.